Caalamka Online » Itoobiya oo Mar kale ay dib uga Qaarxeen Banaan baxyadii xili iyaga iyo ONLF Nirobi uu shir uga Socdo
Itoobiya oo Mar kale ay dib uga Qaarxeen Banaan baxyadii xili iyaga iyo ONLF Nirobi uu shir uga Socdo
February 14, 2018 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Dhanka Kale Waxaa maalintii Afaaraad galay wadahadalo magaalada Nairobi uga furmay ONLF iyo Itoobiya, waxayna ka socdaan goob qarsoodi ah.
Afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge ayaa warbaaahinta Uxaqiijiyay dhab ahaanshaha, Raajo wayne ka muujiyay in wadahadalada ay si wanaagsan ku socdaan, lagana soo saari doono war saxaafadeed.
Ma ahan markii ugu horeeysay ee ay wadahadlaan Itoobiyo iyo ONLF, laakiin waxa ay u egtahay in kuwan ay aad uga miisaan culusyihiin kuwii hore.
Hirmooge, oo la waydiiyay moowqifka jabhadda ee wadahadala ayaa yiri “Barnaamijka siyaasiga ah ee ONLF ayuu ku xusanyahay in khilaafka Ogaadeeniya iyo Itoobiya lagu xaliyo hab wadahadal ah, mana ahan markii ugu horeysay, 1989-kii ayaan wadahadalnay, 1990-kiibaan wada hadalnay”.
Dad badan ayaaa hadal haaayo iyaga oo ay qaarkood sheegeen in ONLF ay lumisay Furso badan oo dadka deegaanka Hormar uhorseedi lahaa, hadii ay mar hore laheshiin lahaayeen halkaasna ay ku bad baadi lahaayeen dad fara badan oo hada geeriyooday iyo dadkii ay ka bexeen.
sidoo kale waxaa jira qaar qaba in hada itoobiya ay bur bur ku dhaw dahay taasna ay tahay in in ONLF sanado baadan ka dib maarkii ay guusha dhawaatay in is dhiibeen.